Challenge The Good News Paper - Kuzvininipisa ndiko kwakaunza chirevo choupenyu (Shona)
Kukura kwaDavid kwaiva kwakareruka zvikuru kusvika apo pakazoshaya baba vake, chiriporiporipo muhnu waakanga akatarisa paupenyu akanga asisipo.
Kuzvitutumadza noupfambi ndozvakazonyanya kuparadza chimiro chake, apo akanga oedza kumira patsoka dzababa vake asi iye ndookutanga kufambidzana nemadzimai akawanda.
David anoti, "ndaisateerera ani zvake chero akanga achitaura chokwadi. Ndakanga ndava noundyire nguva dzose uye ndaisa bvuma mhosho dzangu, panguva iyoyi, ndaisafunga nezvaMwari nokuda kwokuti mhuri yangu yaivawo nenzira dzayaita nadzo zvinhu zvekunamata... ndakarasikirwa zvikuru panyaya dzokuziva Mwari."
Mukana wokuziva Mwari wakazovapo apo David akasungwa ndokutongerwa kugara mutirongo kwemakore masere, abatwa nemosva yokupwanya imba nechinangwa chokuba.
David anoti, "ndaingogaronzwa nezva Jesu, Mwari mwanakomana, apo ndaiva panze petirongo Asi handina kumbofungisisa nezvake. Pandakotanga kunyatsoverenga bhaibheri ndiri mutirongo ndipo pandakato shamiswa nounaku hwezvinobva kuna Jesu.
Ipapo David akaverengawo bhuku roMuparidzi, akashamiswa nenyaya yokuva nonkama chaihwo naMwari.
Muchikamu chokupedzisira mubhuku roMuparidzi, David akaverenga kuti 'Rangarira musiki wako mumazuva mdiki hwako, mazuva namakore okutambura asati asvika, apo pauchati, handichawane mufaro mwari'. Uyu ndino mugumo wenyaya: Itya Mwari uchengete mirairo yake, nokuti izvi ndizvo zvakatarirwa munhu. Nokuti Mwari uchatonga zvakaitwa zvose, kubatamdzira nezvaka vandika zvose, zvingava zvakanaka kana zvakaipa".
David anoti " ndakadawo kuva mukama naMwari uye nokuti zvivi zvangu zvose zviregererwe, kuitira kuti kana ndichizofa ndive munaJesu wokusingaperi.
Mushure mokuverenga Bhaibheri, David akazwa kuti Mwari vaizomutongera zvivi zvake, asiwo Mwari vakatuma Mwanakomana wavo Jesu Kristu kuti atakure zvivi zvake (David) kuti agorega kutongwa.
David anoti " ndinoziva kuti Jesu ndiye anogona kundipa zororo, kuburikudza naiye chete, kunoita kuti ndizive chimiro chezvandiri chaizvo.
Pandakatanga kudana zita raJesu zvinhu zvinoshamisa zvakatanga kuitika. Mwari vakashandura murangariro yangu vakandipa rugare rwandakanga ndisima kumbova narwo upenyu hwangu hvose. Mwari vakandibatsirawo kuti ndirege kuva nehasha vakaita kuti ndidzikame.
David anoti pakarepo akawana hupenyu hutsva hwokushumira Mwari, kubva mutirongo chaimo. Imwe yenzira dzinoshamindiswa naDavid ndiyekutaurira vamwe vasungwa kuti vanga vawosei nonkama waMwari uyo anavada.
Kuna avo vasati voziva Mwari David anoti " Jesu chete ndiye anokupa rugare muma zvose, nokuti kana usina Jesu mumpenyu hwako zvinhu zvose hazvina kumira zvakanaka, chero uine zvizhinji kana zvishoma. Jesu chete ndiye anoziva zvakakunakira uye ndiye chete anogona kukusumungura kubva mumatambudziko ako ose kuburikidza nokuregerera uye noruponeso. •
<< Nederigheid bring nuwe betekenis in die lewe (Afrikaans)
Can we trust the Bible? >>